‘अपहरित’ सांसद यादव भन्छन्, ‘मेरो ठूलो सपना साकार भयो’ « Kakharaa
‘अपहरित’ सांसद यादव भन्छन्, ‘मेरो ठूलो सपना साकार भयो’
११ बैशाख, काठमाडौं । समाजवादी पार्टी नेपालका नेता एवं पूर्व स्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. सुरेन्द्र यादवले आफ्नो ठूलो सपना साकार भएको बताएका छन् । समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)को एकता भएसँगै आफ्नो लामो समयदेखिको सपना साकार भएको बताएका हुन् । उनले भने, ‘अहिले दुईवटा पार्टी एक हुनु नै मेरो लागि सबैभन्दा ठूलो कुरा हो ।’
बुधबार साँझ पूर्वस्वास्थ्य राज्यमन्त्री डा. यादवलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै निर्देशनमा अपहरण गरेको समाजवादी पार्टीले आरोप लगाएको थियो । आफूलाई नेकपा सांसद महेश बस्नेत, किसान श्रेष्ठ र केही प्रहरी अधिकृतको टोलीले राति ३ बजे काठमाडौं ल्याइपुर्‍याएको डा.यादवले बताएका छन् ।
राति काठमाडौं ल्याइएका यादवसँगै समाजवादी पार्टीका केही सांसदलाई नक्शालस्थित मेरियट होटलमा राखिएको थियो । तर डा. यादव बिहीबार विहानै होटलबाट बाहिर निस्कन सफल भएको र पार्टीको सम्पर्कमा आएका थिए । अहिले आफू समाजवादी पार्टीका नेताहरुसँगै रहेको अपहरित भनिएका डाक्टर यादवले जानकारी गराएका छन् ।